Sawirro: Saraakiil Itoobiyaan Ah oo Muqtaar Roobow Kusoo Dhaweeyay Xudur! – Shabakadda Amiirnuur
November 29, 2017 4:25 pm by admin Views: 158
Saraakiil ka tirsan Xabashida Itoobiya ayaa maanta magaalada Xudur kusoo dhaweeyay Muqtaar Roobow Abuu Mansuur oo bishii August ee sannadkan isku dhiibay DF.
Roobow ayaa waxaa safarkii uu ku tagay Xudur ku wehlinayay wasiirkii hore ee gaashaandhigga iyo saraakiil kale, waxaana jira warar kala duwan oo kasoo baxaya socdaalkiisan.
Sawirrada laga soo qaaday waxaa laga dheehanayaa in ay dhiniciisa bidix socdaan saraakiil ay kuwa Itoobiya kamid yihiin, waxaana soo dhaweyn kadib uu kulamo la qaatay saraakiisha Xabashida iyo kuwa DF.
Roobow ayaa dhowr sannadood ka hor aaminsanaa in Xabashida Itoobiya yihiin cadaw luqadda lagula hadlana ay tahay xabbad laakin waxaa maanta muuqanaya in Itoobiya ay xabadii wadato isaguna uu ka tanasulay dagaalkii uu kula jiray, taa badalkeedana uu daneynayo inuuba iyaga ka garab dagaalamo.
Xarakada Al-Shabaab illaa iyo hadda wax war ah kama aysan oran isdhiibidda roobow iyo dhaqdhaqaaqyadiisa la xiriira inuu ka garab dagaalamo shisheeyaha, waxaana ay tani meesha ka saaraysaa wararka ay dadka qaar faafiyaan ee ah in Al-Shabaab ay gaaleysiiyaan ciddii ka tagta, laakin waxaa hubaal ah in haddii uu Muqtaar si rasmi ah ugu biiro safka cadawga in lagu xukumi doono wixii uu isagu ku xukumi jiray cidda shisheeyaha la safata.